कस्तो आउनुपर्छ बजेट? « Lokpath
कस्तो आउनुपर्छ बजेट?
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७६, बुधबार ११:३१
बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेट विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने स्पष्ट पारे ।
विगतमा एक सातामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तितो सुनाउँदै बजेटको कार्यान्वयनको अनुगमनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, रकमान्तर गर्ने कुरापनी संवेदनशील रहेकोले यसतर्फपनि सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।